I-MET GALA 2021: EYONA IJONGEKA ILUNGILEYO KUBAQEQESHI 'BELIZWI' - IINDABA
Ingxowa mali yonyaka yeMetropolitan Museum of Art, iMet Gala, ngalo lonke ixesha itsala ezona nkwenkwezi zinkulu eHollywood.
Le yr, abanye abantu abadumileyo abakhe babizwa ngokuba ziimpawu zeMet Gala baye basilela. Umntu odumileyo wePop u-Ariana Grande wayengekho. Ngomhla we-gala, uGrande uthathe ku-Instagram ukubhengeza ixesha elitsha kraca leLizwi aza kuthi enze kulo ukuqala kwakhe njengomqeqeshi. Akucaci ukuba kutheni uGrande engakhange aye kulo msitho.
Kwi-Met Met Gala ka-2018, uGrande wabethelela umxholo (amaZiko aseZulwini: Imfashini kunye nokuCinga kwamaKatolika) kwisambatho sikaVera Wang esineefoto ezivela kumfanekiso oshicilelweyo kaMichaelangelo.
Abaqeqeshi abathathu beLizwi bebekhona kule yr. Funda ukuze ukhangele ukuba ngubani owayekhona kwaye nokuba kutheni abanye besilele.
UFaro, uAlicia Keys, kunye noJennifer Hudson
UFarrell, uJennifer Hudson, kunye noAlicia Keys bebekhona bonke kule Met yasesikolweni yr.
I-kirk kunye ne-candace cameron yosapho
Emva kwamaxesha ama-4 okufundisa kwiLizwi, uPharrell wazisa ukuba akazukubuyela kulo mboniso ngo-2020. KwiMet Gala, uPharrell kunye neqabane lakhe uHelen banyikimisa iimpahla zikaChanel ezazisuselwa kwisikhumba kunye neqhina lebhola.
Oko umxholo wale gala yr wawuseMelika: Isichazi-magama sefashoni, isinxibo sasentshona sasiyifashoni. UJennifer Lopez wayenxibe ingubo kaRalph Lauren enomnqwazi ofanayo weenkomo. Uye watyala ngokuncamisana nesoka lakhe elitsha u-Ben Affleck kwesi sihlandlo.
Ukuba andinayo imvumi uAlicia Keys wayengumqeqeshi kwiLizwi kumaxesha amathathu. Kamva wayalela u-Ellen DeGeneres ukuba wayegula nje ngo-Blake kwaye watsho ukuba umboniso kufuneka umqinele ukuze aphumelele emva konyaka.
Ngenwele enezacholo enezacholo, inkulumbuso, isiketi esiphucukileyo setyulile, kunye nobucwebe obuncinci bokuqinisekisa, uKeys ubonakale emhle kule Met Gala yr.
I-American Idol alum kunye nomlingisi we-Dreamgirls uJennifer Hudson wayengumqeqeshi kwi-US nganye kunye nemodeli yase-UK yeLizwi. Uvele kwi-Met Gala njengomntu ocingayo kunye nongqombela ebomvu ngombala onesinxibo esifanelekileyo kunye nohlaziyo oluhle.
Wayephi uGwen Stefani?
Umqeqeshi welizwi u-Gwen Stefani kungenzeka ukuba oyena Mntu mkhulu u-Met Gala ubonakala ngo-2019 kwimpahla yokubonisa intombazana yase-Vegas enengubo yoboya ende, enezacholo. Ke lendawo ibingu Stefani this yr?
Imvumi yangaphambili engathandabuzekiyo okwangoku isestratweni kunye nomyeni wayo kunye nomqeqeshi weLizwi, uBlake Shelton. Wathumela ividiyo ye-Instagram ngomhla we-gala ene-hashtag #friendsandheroestour, ukuchonga ukhenketho lwangoku lukaShelton.
Wayephi uJohn Legend?
UJohn Legend kunye neqabane lakhe uChrissy Teigen bazimase iMet Gala kwi2017 nangona kunjalo bebengekho kule yr. Ngokuka-Instagram kaTeigen, esi sibini besibhiyozela isikhumbuzo seminyaka eli-15 njengobambeleyo!
Enkosi uYai ngokuthatha uLuna amlandele kuqala kunye nabasebenzi bakhe abatsha !! Ndihlala ndikhumbula ukuba undizisa kwiindlela zam kwakhona emva kosuku !!! Umama kunye no-pa bangaphandle bebhiyozela iminyaka elishumi elinesihlanu ngokudibeneyo, kumhla wangoku. Mnumzana othandekayo, uTeigen uchaze umfanekiso we-Instagram kamama wakhe ephethe intombi yakhe uLuna.
mingaphi iqela likajustin roberts 10
Ilizwi libuya ngoMvulo, nge-20 kaSeptemba ngo-8 ebusuku. Ixesha laseMpuma kwi-NBC.
Izigaba: Iwiki Amazon-Prime Tech-Iindaba
kuchazwe iingelosi needemon
Ikrisimesi emnandi yokuntywila
james brown bhanyabhanya kwi-netflix
Isamente yekrisimesi ngenkwenkwezi
iAmerican ifumene italente